Andro tsara ho an'ny fizahan-tany Malezia sy Hawaii: $ 189 akaiky amin'ny Air Asia
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » USA Travel News » Andro tsara ho an'ny fizahan-tany Malezia sy Hawaii: $ 189 akaiky amin'ny Air Asia
Andro nahafinaritra ho an'i Malezia sy ny fizahan-tany Hawaii androany. $ 189 Honolulu - Kuala Lumpur. Tsy tahan'ny indostrian'ny fitsangatsanganana izany, tsy hosoka fa vidin'ny tapakila tokana amin'ny Air Asia avy any Honolulu mankany Kuala Lumpur, na $ 799.00 amin'ny seza fisaka premium.
Tale Jeneralin'ny Air Asia X Benyamin Ismail ary ny filoham-pirenena Tan Sri Radidah Aziz miaraka amin'ny masoivohon'i Malezia any Etazonia HE Tan Sri Dr. Zulhasnan Rafique dia nanatevin-daharana ny Lehiben'ny mpiasa ao amin'ny State of Hawaii Mike McCartney, filoham-pirenena misahana ny fizahan-tany sy mpitsabo Dr. Szigeti io tolakandro io tao amin'ny Royal Hawaiian Hotel malaza mba hankalazana ny fahatongavan'ilay mpitatitra mora vidina voalohany avy any Azia nikitika natao tao amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Honolulu.
Manantena mafy ny hiditra ny tsenan'i Etazonia amin'ny sidina mankany Honolulu i Air Asia taorian'ny nisintahan'ny National Carriers, Malaysian Airlines. Ny masoivoho Dr. Zulhasnan Rafique dia nilaza tamin'ny tale jeneralin'ny Air Asia androany: "Ny iraky ny masoivoho mba hijery ny US West and East Coast ho toy ny vavahady fanampiny."
Ny Air Asia dia tsy hita amin'ny sehatra famandrihana mahazatra toy ny Expedia fa miankina amin'ny vavahady famandrihana azy manokana ao airasia.com . Ny orinasa lehibe ho an'ity mpitatitra vola lafo ity dia ny famandrihana FIT. Tsy mpandraharaha mpandeha fiaramanidina matetika no manolotra. Hoy ny Air Asia CEP Ismail tamin'ny eTN: "Anisan'ny maodelin'ny asa aman-draharaha eto amintsika ny hitazomana ny fandaniana ambany." Raha tokony handoa kaomisiona amin'ny famandrihana vavahady na mpiasan'ny fizahan-tany izahay dia mitazona izany vola miditra izany ao an-trano ary mampita tahiry amin'ireo mpandeha anay. ”
Ny sidina avy any Kuala Lumpur dia mijanona ao Osaka miaraka amin'ny alàlana fifamoivoizana feno haka sy hitaterana mpandeha eo anelanelan'i Honolulu sy Osaka. Raha ny filazan'ny filoham-pirenena misahana ny fizahan-tany sy ny CEO George Szigeti, Hawaii dia 20% amin'ny tsena Japoney i Osaka. Osaka sy Honolulu izao dia mifandray amin'ny $ 149.00 fotsiny.
Hawaii dia maniry mpitsidika maro avy any Malezia sy ireo faritra sisa ao amin'ny faritra ASEAN, tian'i Malaysia ny fanaparitahana izany Aloha Fanahy any Malezia. Ny birao fizahan-tany avy any Indonezia ka hatrany Thailand dia mijery ity rohy manintona vaovao ity hisarihana vondrona mpitsidika nohatsaraina.
Ny sidina farany amerikana nampifandray an'i Hawaii tamin'i Bali tamin'ny alàlan'ny Guam dia ny Continental Airlines, izay lasa United Airlines. Miaraka amin'ny Air Asia, misy rohy mora vidy eo amin'ireo nosy roa ireo dia miorina amin'ny alàlan'ny Kuala Lumpur.
Rehefa nanontaniana momba ny fahasahiranan'ireo mpivahiny Maleziana ny fahazoana visa any Etazonia, hoy ny masoivoho malay eTurboNews. “Manantena izahay fa hampiana ao amin'ny programa US Visa Waiver tsy ho ela i Malezia. Izahay dia efa nahatanteraka ny fitakiana rehetra ataon'ny governemanta amerikana, afa-tsy ny tahan'ny fandavana ny Maleziana mangataka visa Amerikanina dia tokony ho 3%. Amin'izao fotoana izao dia 3.4% io taha io.
Air Asia dia manana tambajotra tena tsara ao anatin'ny faritra ASEAN ary hatrany Moyen Orient afaka mampifandray tanàna 120+ amin'i Honolulu. Ilay mpitatitra mora vidy dia manome serivisy fifaninanana miaraka amin'ny tsiky aziatika. Naseho androany ny mpanatrika sidina japoney Air Asia tsara tarehy efatra nanatevin-daharana ny hetsika.
Nilaza ny Tale jeneralin'ny HTA George Szigeti eTurboNews, ity rohy an-habakabaka ity dia manokatra fotoana vaovao ihany koa ho an'ny MICE (Indostria fihaonana sy fandrisihana) ary hanamafisana ny Hawaii Convention Center ny tanjon'izy ireo ho tonga toeram-pivoriana eo Atsinanana sy Andrefana any Pasifika.